March 5, 2021 – မြန်မာသတင်းစုံ
သမီးနံမည်က ငယ်ငယ်ပါ. ရန်ကင်းမှာ နေပါတယ်. သမီးက တစ်ဦးတည်းသော သမီးပါ. ဒါကြောင့်မို့ သမီးက သူငယ်ချင်းတွေကို အင်မတန်ခင်ပြီး စိတ်ရောကိုယ်ပါ ပေါင်းတက်ပါတယ်.. သမီးရဲ့ အပျိစင်ဘ၀ဟာလဲ သူငယ်ချင်းကို ခင်မိလို့ ဆုံးခဲ့ရတာပါ… ဖြစ်ပုံလေးကတော့… သမီးအသက် ၁၄ နှစ်ပြည့်ချိန်မှာတော့ သမီးရဲ့ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်ဟာ ၈ တန်းကျောင်းသူနဲ့ မလိုက်အောင် ဖွင့်ထားလာခဲ့ပါတယ်. ကျောင်းကကောင်လေးတွေ သမီးရဲ့ ကိုယ်လုံကိုယ်ပေါက်အကြောင်း လိုက်လိုက်စကြလို့ ငိုရတာလဲ အမောပါဘဲ. တစ်ခါတလေ ကျောင်းတောင် မသွားချင်ပါဘူး. အတန်းထဲမှာ ဆရာမက စာထဆိုခိုင်းတဲ့ အချိန်ဟာ သမီးအတွက် ငရဲပါဘဲ.. နောက်ကကောင်လေးတွေက ကျမရဲ့ ဖင်လေးကို ဝါးစားမတက် ကြည့်ကြတဲ့ သူက တမျိုး.. သားရေကွင်းနဲ့ လှမ်းပြစ်တဲ့ သူကတမျိုး နဲ့ စာတောင် ကောင်းကောင်း […]
Posted on March 5, 2021 Author admin	Comments Off on ခလေးရဲ့ဦး
Posted on March 5, 2021 Author admin	Comments Off on အားမရတဲ့ကျမ
သူငယ်ချင်း ငါတော်တော်အခက်အခဲ ဖြစ်နေလို့ပါကွာ။ ကူညီပေးပါလား””ခက်တယ်ကွာ။မင်းကလဲ ဇွတ်ကြီးပဲ။ အေး ရရင် ငါပြောမယ်။ မင်းကိုဆက်သွယ်လို့ရမယ့်ဖုန်းပေးခဲ့””အေးအေး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာ” ငြိမ်းချမ်း တယောက် မငြိမ်းချမ်းနိုင်သေးပါ။ သူထောင်က လွတ်လာတာမကြာသေး။ သူထောင်ကျရတာလဲ ခုသူမျက်နှာအောက်ကျပြီး အကူအညီတောင်းနေရတဲ့ ဝေယံဟိန်းရဲ့ အပြစ်လဲမကင်းပေ။ သူတို့တွေက တောင်ကြီးနည်းပညာတက္ကသိုလ်က ပထမနှစ်ကတည်းက တဆောင်တည်း နေခဲ့ခင်ခဲ့ကြတဲ့သူငယ်ချင်းတွေ။ မေဂျာတွေ မတူကြပေမယ့် ဆိုးဖော်ဆိုးဖက် ငတ်ဖော်ငတ်ဖက်တွေမို့ ညီအကိုတွေထက် ချစ်ကြသည်။ သူက မိဘမရှိ။ ဦးလေးဖြစ်သူက ကြည့်ရှူ့စောင့်ရှောက်ထားတာ။ ညီအကိုသားချင်းမရှိတော့ သူငယ်ချင်းတွေကို အရမ်းမင်သည်။ ဒါကြောင့် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပတ်သတ်လာရင် အစစအရာရာ အနစ်နာခံသည်မို့ သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေပေါသည်။ နောက်ဆုံးနှစ်စာမေးပွဲဖြေပြီးညမှာတော့ သူငယ်ချင်းတွေ ခွဲရတော့မယ်ဆိုပြီး သောက်ကြစားကြသည်။ ပြီးတော့ လျှောက်လည်ကြတော့ သူက မသွားချင်။
Posted on March 5, 2021 Author admin	Comments Off on တန်းတန်းစွဲမိနေပြီ
ရဲဇော်နှင့်ဒေါ်ခင်ခင်သူတို့၏ ဝတ်လစ်စလစ် ခန္ဒာကိုယ်နှစ်ခုသည် သိမ့်သိမ့်တုန်၍သွား၏။သူတို့ နှစ်ဦးသည် တယောက်ကိုတယောက် သိမ်းကြုံးကာ တင်းကြပ်စွာဖြင့် ဖက်ထားကြ၏။ ခဏမျှအကြာတွင်တော့ သူတို့၏ ကိုယ်နှစ်ခုသည် တဖြေးဖြေးငြိမ်ကျသွားရတော့သည်။ ရဲဇော်၏ဦးခေါင်းသည် မျက်လုံးနှစ်လုံးပိတ်၍ ပက်လက်လေး မှိန်းနေသော ဒေါ်ခင်ခင်သူ၏ ဦးခေါင်းပေါ်တွင် မှောက်လျှက်သားဖြစ်ကာ ပါးချင်းအပ်လျှက်ရှိ၏။ (၅)မိနစ်မျှ ကြာသွားသောအခါတွင် ရဲဇော်၏ကျောပြင်ကို ဖက်ထားသော ဒေါ်ခင်ခင်သူ၏လက်နှစ်ဖက်မှာ ဖြေးဖြေးချင်း လှုပ်ရှားလာလျှက် ရဲဇော်၏ ကျောပြင်ကျယ်ကြီးကို သူမ၏လက်ဖဝါးလေးဖြင့် ပွတ်သပ်၍ပေးလာ၏။ ပြီးတော့ သူမနှင့် ပါးချင်းကပ်လျှက် မှောက်လျက်သားလေးရှိနေသော ရဲဇော်၏မျက်နှာဘက်သို့ ဒေါ်ခင်ခင်သူသည် သူမ၏ပက်လက်လှန်၍ထားသော မျက်နှာလေးကို လှည့်ကာ အောင်ကိုနိုင်၏ ပါးပြင်သို့ သူမ၏နှာသီးဖျားလေး ဖိသွင်းလျှက် ရှိုက်ကာရှိုက်ကာဖြင့် အားပါးတရနမ်းလိုက်လေသည်။ထိုအခါတွင်တော့ သူမ၏မျက်နှာလေးဘေးမှ မှောက်လျက်သားရှိနေသော ရဲဇော်၏ဦးခေါင်းသည်ခေါင်းထောင်၍ ထာလာလေသည်။
Posted on March 5, 2021 March 8, 2021 Author admin	Comments Off on မထိန်းနိုင်တော့ဘူးရှင်
အိပ်မရတာနဲ့ဖေ့ဘုတ်ပွတ်နေတုန်းမက္ဆေ့ကနေ ကလင်ဆိုတဲ့အသံကြားတော့ဘယ်သူစာပို့လာ တုန်းလို့ကြည့်မိလိုက်တယ် အကောင့်စိမ်းမလို့ ပြန်မဖြေတော့ပဲ ဟိုဟိုဒီဒီဆက်ကြည့်နေတုန်း စာထပ်ဝင်လာတယ် နင်ကမာနကြီးနေတယ်ပေါ့ ဆိုတာနဲ့ကိုနဲ့သိတဲ့လူတစ်ယောက်ယောက်ဖြစ် ဖို့သေချာတယ်ဆိုပြီး မဟုတ်ပါဘူးမအားသေးလို့ မပြန်တာစိတ်ထဲမထားနဲ့လို့ စရင်းဘယ်သူလဲလို့ စမေးလိုက်တယ် အကောင့်တုနဲ့ပုံမတင်ထားပဲရင်းနှီးတဲ့အထာနဲ့ ဆိုတော့ကို့မြို့ကဆိုတာသေချာနေပြီလေ profile ထဲဝင်ကြည့်တော့မိန်းခလေးဖြစ်မယ်လို့ထင်နေ တုန်း အိပ်မရလို့ဟာနင်ပဲမီးစိမ်းနေတာစကားပြော ဖော်မရှိလို့စကားပြောချင်လို့ပြောလာတယ် နင်ငါ့ကိုသိလို့လားဆိုတော့သိပါ့နင်လိုငပွေငရှုပ်ကို မသိတဲ့လူမရှိဘူးဆိုပြီးစကားစတာနဲ့အထာတစ်ခုခု ပဲလို့ချက်ဆိုမီးတောက်လိုက်တယ် ပွေရှုပ်မှန်းသိရင် စကားပြောမနေတော့နဲ့လို့တင်းလိုက်တော့ နင်ကလဲ စတာပါဟတဲ့ လေသံစလျှော့လာတယ် နင်ဘယ်သူတုန်းနင့်ပုံလဲမတင်ပဲငါကဘယ်သူလဲမသိ ပဲနင်နဲ့စကားပြောရတာ အမှောင်ထဲကျွဲစီးပြီးမီးသွေး ရောင်းတဲ့ကောင်လိုဖြစ်နေပြီဆိုတော့နင်ကငါ့ကိုမှတ်မိ ချင်မှမှတ်မိပါမှာတဲ့။
Posted on March 5, 2021 Author admin	Comments Off on အပျိုလေးအထာ
စာရေးသူကငယ်ငယ်ကဝါသနာရှင်တယောက်ပေါ့..အချောင်းကောင်း၍ဖရီးစားရသောအခါများလည်းကြုံဖူးပါသည်.. ဒီဇာတ်လမ်းလေးက(၁၉၉၆)လောက်က.အတွေ့အကြုံလေးကိုအခြေခံပါသည်… ..ခုခေတ်ကတိုက်ခန်းတွေများ၍ချောင်းဖို့ကသိပ်မလွယ်တော့ပေ…..လှိုင်သာယာမြို့သစ်စပေါ်ပီးနောက်မြို့သစ်အစွန်းပိုင်းများတွင်တနေ့လုပ်တနေ့စားများစုပီးနေကြသောရပ်ကွက်တခုရှိသည်..ပေ၂၀ကိုတအိမ်ဆောက်နေကြတဲ့အချိန်ပေါ့ဗျာ..အိမ်ရှင်အများစုက ဆယ်ပေတခြမ်းကိုထရံကာပြီးငှါးစားကြသည့်အချိန်..ပေါ့..(မင်းမင်း…နယ်ကတက်လာပီး..ရန်ကုန်မှအသိတယောက်ဆီမှာတည်းခိုရင်းအလုပ်ရှာသည်..လှိုင်သာယာကစက်ရုံတခုမှာအလုပ်ရ၍..အလုပ်နှင့်နီးသော ထိုရပ်ကွက်တွင်အိမ်ငှါးနေရန်ရှာရပါတော့သည်). .အကျင်းချုပ်ပြောရရင်တော့..ဆယ်ပေခန်းလေးရတာပေါ့ဗျာ.. ခေါင်းရင်းခန်းအိမ်ငှါးက..လင်မယား..ခလေးကမရှိကြသေး..မင်းမင်းကခြေရင်းခန်းမှာနေသည်..ကိုကျော်ကြီးနှင့်မထား..ကလင်မယား..ကျော်ကြီးမှာကားစပါယ်ယာဖြစ်သည်…မထားမှာမင်းမင်းနှင့်တစက်ရုံထည်းအတူလုပ်ကြ၍မင်းမင်းနှင့်သိကြကာ သူတို့ခြေရင်ခန်းငှါးမည်ဟု.အိမ်ရှင်က ပြောသဖြင့် မင်းမင်းငှါးနေရန်အဆင်ပြေသွားလေသည်… ..။
Posted on March 5, 2021 Author admin	Comments Off on ပစ်မသွားနဲ့နော်
စက်ရုံကနေညဆိုင်းဆင်းပြီးပြန်လာတော့ ညကိုးနာရီခန့်ပင်ရှိနေချေပြီ။ ဒီနေ့ညမှ အရင်ကပို့ပေးနေကျ ဖယ်ရီ ဒရိုင်ဘာနေမကောင်းသဖြင့် ကိုယ့်အစီအစဉ်နှင့်ကိုယ်ပြန်ရလေသည်။ ယခင်ကဆိုလျှင်တော့ အတူပြန်နေကျ တစ်ရပ်ကွက်ထဲနေ သူငယ်ချင်းမတွေရှိပေမဲ့ ယခုတော့ အများစုက စက်ရုံပြောင်းသွားကြသည်မို့ မြသီတာတစ်ယောက်ထဲဖြစ်နေသည်။ ရှေ့သုံးလမ်းကျော်လောက်ဆို အိမ်နားရောက်ခါနီးပြီမို့ မြသီတာ သတ္တိမွေးအားတင်းပြီးလျှောက်လာခဲ့သည်။ လမ်းမီးတိုင်တွေကလဲ မီးမလင်းတာကများနေတော့ လမ်းကအတော်လေးမှောင်သည်။ မြသီတာတို့ ရပ်ကွက်နားတစ်ဝိုက်ကလမ်းတွေက ညဆိုလူပြတ်လေရာ မှောင်ကလဲမှောင်နဲ့ ကျောချမ်းစရာတော့ကောင်းလှသည်။ ဒီကြားထဲ မြသီတာက သရဲကလဲကြောက်တတ်သေးသည်။ ဒီလမ်းနားမှာ ပြီးခဲ့တဲ့တစ်လလောက်က ကောင်မလေးတစ်ယောက် ညဘက်အိမ်အပြန် မုဒိန်းကျင့် ဓားနှင့်ထိုးသတ်ခံရပြီး အခုထိလဲလက်သည်မပေါ်သေး။ ဒီကြားထဲ အသတ်ခံရသည့် ကောင်မလေးက သရဲဘဝနှင့် မကျွတ်လွတ်ပဲ ခြောက်လှန့်နေသည်ဆိုသည့်အတွက်။
Posted on March 5, 2021 Author admin	Comments Off on ပိုအရသာရှိသည်
Posted on March 5, 2021 Author admin	Comments Off on စားဆော်ကြီးများ
Posted on March 5, 2021 Author admin	Comments Off on မောင့်စိတ်ကြိုက်